Mihodinkodina an-toerana… | NewsMada
Par Taratra sur 30/08/2019
Tsy mbola ahita-mitsinjo na manangasanga ny tena ho avy, manoloana ny tranga miseho eto amin’ny firenena. Mihodinkodina an-toerana, tsy hita ny tena lalana hizorana. Miaina amin’ny zava-miseho fotsiny ny mpitondra sy ny vahoaka. Lany andro sy resaka amin’ny fifamaliana anaty tambajotra sosialy na koa tsy maintsy mamaly bontana ny tsikera sy fanakianana mahazo laka etsy sy eroa. Mifampiampanga avy eo mifampitory ary ny hiafarany mifanagadra… Fiainan’ny samy mandeha samy mitady. Tsy miraharaha : fahadiovana, fitsipika farafahakely hajaina. Mihoa-pefy sy tsy manara-dalàna. Tsy misy mivaky loha afa-tsy ny anio ihany aloha na koa ny eo ambany maso. Mamerina an-jambany ny hadisoan’ny teo aloha. Tsy mba mahay maka lesona. Fotoana izao hanaingana ny tena izy : fampandrosoana ny firenena. Efa vory lanona eo an-tanana avokoa ny zavatra rehetra. Inona no mbola mampisalasala na tsy handrosoana ? Aiza ny tena olana ? Ifampizarao ny andraikitra.
Ahoana ny fiakaran’ny vidim-piainana ? Ny olan’ny fandriampahalemana miverimberina ve tsy efa mba ahitana vahaolana ? Aiza ho aiza ny famoronana asa ? Ahoana ny hiatrehana ny maitso ahitra fa tsy hiandry tahaka ilay sori-baton’ilay jamba ka voa vao mihilana… Ampahany lehibe indrindra aloha ireo… Tsy vitan’izany anefa fa esorina ireo tsy mahavita azy na tsy mahatanteraka ny asa ankinina aminy. Halavirina ny tandapa sy ny tompomenakely mpitaty ran-kena manome endrika ratsy ny fitantanana na zatra ny lalan-dririnina… Na koa ireo te hametraka fa izahay aloha izao ny eto…
Ampiharo ny lalàna sy ny fitsipika, manomboka any an-tampony ka hatreny ifotony. Tsy hijerena tavan’olona fa faizo ireo mihoa-pefy ary tanteraho ny fanamby napetraka. Lany foana ny sakay na mangidy aza rehefa tenierana. Tsy misy mafy tahaka ny tany Andriba, araka ny fitenenana. Mitaky asa vavany avy hatrany ny rehetra ary tokony ho hita taratra sy hiantraika any amin’ny aty vilanin’ny tsirairay izany. Ampy izay ny resaka ambony latabatra sy ny fivorivoriana etsy sy eroa na koa ny famerimberenana fa horaisina ny fepetra… Nefa ny eo ihany ny eo na manao afo mololo… Mihazakazaka ny fotoana, sao lany andro mihodinkodina am-pitoerana eto isika ka hampahazo vahana ny “mpanenjika any afara…”